पल र समीक्षा विवादको वास्तविकता के हो ? दुवैले दिए पालैपालो स्पष्टीकरण – OSNepal
पल र समीक्षा विवादको वास्तविकता के हो ? दुवैले दिए पालैपालो स्पष्टीकरण
काठमाडौं, ८ कात्तिक । नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी केही समययता चर्चामा छन् । उनीहरूबीचको अन्तरंग सम्बन्धबारे फिल्मनगरीमा चर्चा चल्न थालेपछि यी दुई केही समयदेखि मिडियासँग समेत साक्षात्कार गर्न डराइरहेका थिए ।
पलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुलाई हुँदै नभएको र नगरिएको आरोप लगाइएको बताएका छन् । ‘काम गर्ने क्रममा व्यक्ति वा समूहसँग नजिक भइन्छ र सांगीतिक सहकार्य समीक्षासँग भएको हो’ पल लेख्छन् ,’पछिल्लो केही दिनयता आएका खबरले मेरो शुभचिन्तकसँगै परिवारलाई समेत दु:खी बनाएको छ ।’ समीक्षासँग रहेको मित्रतालाई अन्य नाम नदिन आग्रह गर्दै उनले चरित्र ह त्या हुने गरी समाचार नबनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।